ရဲစခန်းက အမှုဖွင့်မပေးရင် ဘာလုပ်ကြမလဲ ??? - Thadin
HomeKNOWLEDGEရဲစခန်းက အမှုဖွင့်မပေးရင် ဘာလုပ်ကြမလဲ ???
ရဲစခန်းက အမှုဖွင့်မပေးရင် ဘာလုပ်ကြမလဲ ???
February 11, 2019 Admin Kwee KNOWLEDGE Comments Off on ရဲစခန်းက အမှုဖွင့်မပေးရင် ဘာလုပ်ကြမလဲ ???
ကျွန်တော်ပြောချင်(ရေးချင်)နေတာကြာပါပြီ။မီဒီယာများ (အထူးသဖြင့် Facebook)မှာ မကြာခဏတွေ့နေရသည့် ရဲစခန်းသို့ ရာဇဝတ်မှုများ သွားရောက်တိုင်တန်းသည်ကို (သတင်းပေးသည်ကို)အမှုဖွင့်ခြင်းမပြုသည့် ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ရဲစခန်းမှာ အမှုတိုင်လျှင် အမှုဖွင့်ပေးရမည်မှာရဲများ၏မဖြစ်မနေ(မလွဲမသွေ) လုပ်ရမည့် အလုပ်ဆိုသည်ကိုရဲတိုင်းသိကြပါတယ်။ အချို့သောနားလည်နှံ့စပ်သည့် ပြည်သူများနှင့် ဥပဒေပညာရပ် တတ်ကျွမ်းသူများလည်းသိကြပါတယ်။
မသိကြသေးသော ပြည်သူများသိနိုင်အောင် ရေးပြရလျှင်ဖြင့်ရာဇဝတ်မှု (ရဲအရေးပိုင်သောအမှု)ဖြစ်ပွားကြောင်း ရဲစခန်းသို့ လာရောက်တိုင်ကြားလျှင် ရဲတွေခေါ်နေကြတဲ့ FIR ဆိုတာFirst In formation Report ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာလိုတော့ ပထမသတင်းပေးတိုင်ချက်ပါ။ ဒီလိုမှုခင်း ဖြစ်ပွားကြောင်း ရဲထံပထမဆုံးပေးတဲ့သတင်းလို့ ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်ချက်လို့ အတိုခေါ်ကြပါတယ်။ဒီလိုရာဇဝတ်မှု ရဲအရေးပိုင်တဲ့အမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရင် ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက် တိုင်ကြားမှသာအမှုဖွင့်ပေးရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နစ်နာသူကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် တိုင်ကြားနိုင်သလိုကြားက သိရှိသူ၊ မြင်တွေ့သူကလည်း တိုင်ကြားနိုင်ပါတယ်။
ဒါကို သတင်းပေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘယ်သူတိုင်တိုင်FIR ဖွင့်ပေးရမှာ အမှုဖွင့်စစ်ဆေးပေးရမှာ ရဲအလုပ်ပါ။တိုင်တဲ့အခါမှာလည်း ရဲစခန်းကို ကိုယ်တိုင်လာရောက်တိုင်ကြားရမှာ ဖြစ်ပေမဲ့ မလာရောက်နိုင်လို့ စာရေးသားပေးပို့တိုင်တာ၊ ကြေးနန်းစာပေးပို့တိုင်တာလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။
ဖုန်းဆက်ပြီးတော့လည်း တိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုနည်းတွေနဲ့တိုင်ရင်လည်း အမှုဖွင့်ရမှာပါပဲ။ဘယ်လိုနည်းနဲ့ တိုင်တိုင် ပထမသတင်းပေးတိုင်ချက်ဆိုတဲ့FIR ကို ချက်ချင်းဖွင့်ပေးရပါမယ်။ ချက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ဆွဲခွင့်လည်းမရှိပါဘူး။ ဖြစ်ပွားပုံ ဖြစ်ပွားသည့်နေရာကို သွားရောက်စစ်ဆေးပြီးခါမှ FIR ဖွင့်လို့လည်း မရပါဘူး။
တိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ ဖွင့်ရမှာပါ။ ဒါကိုပြည်သူတွေသိထားရင်အခုဖွင့်ပေးမှာလား မဖွင့်ပေးဘူးလားလို့ ဗြောင်ပြော ဗြောင်မေးလိုက်ရုံပါပဲ။အမှုဖြစ်ပွားတဲ့ အပိုင်နယ်မြေရဲစခန်းမှာတိုင်မှ အမှုဖွင့်ပေးရတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ မြစ်ကြီးနားမှာဖြစ်တဲ့အမှု ကော့သောင်းက ရဲစခန်းမှာတိုင်ရင်တောင်မှ ကော့သောင်းရဲစခန်းက ဖွင့်ကိုဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြစ်ကြီးနားမှာ သွားတိုင်ပါလို့ ပြောခွင့်မရှိပါဘူး။ ဘယ်စခန်းမှာတိုင်တိုင် ရပါတယ်။FIR ဖွင့်တယ်ဆိုတာကလည်း ဒီအမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့စတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းပါ။ FIR ဖွင့်ပြီးတာနဲ့ ဒီအမှုကိုစစ်ဆေးဖော်ထုတ်ဖို့ ရဲမှာတာဝန်ရှိသွားပါပြီ။ဒီလို FIR ဖွင့်ရမယ်ဆိုတာ ကျင့်ထုံးဥပဒေနဲ့ ရဲလက်စွဲမှာအတိအကျပါပြီး ပြဋ္ဌာန်းပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ရှောင်လွှဲဖယ်သွေခွင့် မရှိပါဘူး။ယုတ်စွအဆုံး အမှုတကယ်မဖြစ်ပါဘဲ အမှုဖြစ်ပွားပါတယ်ကျူးလွန်ခံရပါတယ်၊ နစ်နာပါတယ်ဆိုပြီး လိမ်လည်တိုင်တန်းတာကို (လိမ်လည်တိုင်မှန်းသိနေသည့်တိုင်အောင်)အမှုကိုဖွင့်ပေးရပါမယ်။
တစ်ခါအမှုဖြစ်ပြီး အတော်ကြာမှတိုင်တာကြောင့်လည်းဖွင့်လို့မရဘူး ဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူး။ ရဲအရေးပိုင်မှုမှန်လျှင်ဖွင့်ပေးရပါမယ်။အခြားရဲစခန်းအပိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အမှု ကိုယ့်စခန်းမှာလာတိုင်တာ၊ အမှုမဖြစ်ဘဲ လိမ်လည်တိုင်တန်းတာတွေအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ် ဆိုတာလည်း ရဲတွေမှာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ ရှိပြီးသားပါ။
ဒါရဲအလုပ်ပါ။ ရဲစခန်းအလုပ်ပါ။ကျွန်တော်ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်း ဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေရှိနေပါလျက်၊ ရှိနေကြောင်းလည်း သိနေပါလျက် ရဲတွေကအမှုဖွင့်မပေးလို့ဆိုတဲ့အသံတွေ၊ ပြည်သူတွေရဲ့ မကျေမနပ်သံတွေ၊ ဆဲဆိုသံတွေ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ကြားနေ၊ ဖတ်နေရပါတယ်။
ရဲတွေကို နှိမ်ချပြောဆို ရေးသားနေကြတာတွေ၊ ချိုးဖဲ့၊ လှောင်ပြောင်တာတွေ ကြားနေရတော့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ရဲအဖွဲ့မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်လို့ ကျွန်တော်ရှက်လာမိပါတယ်။ ပြည်သူတွေဘက်ကနေပြီးလည်း မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်လာမိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ ဒီဆောင်းပါးကို ရေးမိတာပါ။ဒီလိုလုပ်ရပ်တွေကြောင့် နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေပါဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း ကြားရတော့ ပိုပြီးစိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် အမှုဖွင့်မပေးရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီလိုအမှုဖွင့်မပေးတဲ့ကိစ္စတွေက ခုမှဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော် လောက်ကတည်းက တွင်ကျယ်လာတာဖြစ်ကြောင်းလေ့လာမိပါတယ်။
ဒီလိုရှိခဲ့လို့လည်း ၁၉၉၅ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲကိုယ်တိုင်အရပ်သားဟန်ဆောင်ပြီး ရဲစခန်းတွေမှာ အမှုသွားတိုင်တာမျိုးလုပ်ပါတယ်။ အမှုဖွင့်မပေးရင် အရေးယူတာတွေလည်းလုပ်ပါတယ်။ အမှုဖွင့်မပေးရင် ထောင်ချသည်အထိ အရေးယူမှာဖြစ်ကြောင်းလည်း ရဲစခန်းတွေမှာ အများမြင်သာအောင်စာရေးကပ်ထားစေပါတယ်။
ဥပဒေလည်းရှိပြီး၊ အထက်လူကြီးတွေလည်း မလိုလားတဲ့ဒီကိစ္စကြီးက ပပျောက်မသွားဘဲ ပိုပြီးဆိုးရွားလာတာ ဘာကြောင့်များပါလိမ့်လို့ စဉ်းစားကြည့်မိပါတယ်။ရဲစခန်းတွေမှာ အမှုဖွင့်မပေးတဲ့ကိစ္စ အကြောင်းအရင်းခံတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ရဲစခန်းတွေဘက်က ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။
ရဲစခန်းတွေမှာအမှုစစ်အရာရှိအင်အားက လျှော့နည်းနေတဲ့အပြင် အမှုစစ်လုပ်ငန်းမဟုတ်တဲ့ ပြင်ပလုပ်ငန်းတွေကလည်း များနေလေတော့ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ဖြစ်ပွားနေတဲ့အမှုတွေကို နိုင်အောင်မစစ်နိုင်ကြဘူး။ အချို့သောမြို့ကြီးတွေက ရဲစခန်းတွေမှာအမှုစစ်တစ်ယောက်မှာ အမှုရာချီပြီးရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဘယ်လိုမှ နိုင်နင်းအောင်စစ်ဆေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြည့်စုံခိုင်မာအောင်လည်း စစ်ဆေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တရားခံအပြစ်ကျနိုင်လောက်တဲ့ သက်သေ အထောက်အထားတွေလည်း ဘယ်လိုမှရှာဖွေတင်ပြနိုင်မယ် မဟုတ်ပါဘူး။နောက်အခက်အခဲတစ်ခုက မြို့ပေါ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့ အမှုဆိုရင်တောင် ဖြစ်တဲ့နေရာကိုသွားဖို့၊ သက်သေရှိတဲ့နေရာကိုသွားဖို့၊ သက်သေခံပစ္စည်းရောက်သွားတဲ့ နေရာမှာသွားသိမ်းဖို့စတာတွေအတွက် လမ်းလျှောက်သွားလို့၊ စက်ဘီနဲ့သွားလို့ရတဲ့ ခေတ်မဟုတ်တော့ပါဘူး။
သက်သေခံပစ္စည်း အတွက်ထင်မြင်ချက် တောင်းခံဖို့ နေပြည်တော်က ဓါတုဗေဒဝန်ရုံးကို သွားရမယ်ဆိုရင် လမ်းစရိတ်ကလည်း မသေးလှပါ။အမှုစစ်စရိတ် ပေးတာရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လောက်ငှနိုင်ပါ့မလား။ ဒီတော့အမှုစစ်တွေ လက်ထဲမှာအမှုတွေပုံနေပြီပေါ့။ ဘယ်စခန်းမှူး၊ ဘယ်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးက အမှုထပ်ဖွင့်ချင်ပါ့မလဲ။
ခုပြောခဲ့တာ ရဲစခန်းတွေဘက်က ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲ အချို့ပါ။ အခြားလည်းရှိပါဦးမယ်။(နောက်ပိုင်းမှာထပ်မံတင်ပြပါမယ်)အမှုတွေဖွင့်မပေးကြတဲ့ကိစ္စမှာ အဓိကကျတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်မြင်တဲ့ အချက်ကတော့ မှုခင်းကျဆင်းရေးဆိုတာကို လွဲမှားစွာဆောင်ရွက်ကြတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မြင်မိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့မှာ မှုခင်းကျဆင်းရေးဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ရှိပါတယ်။ မှန်ပါတယ်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ မှုခင်းတွေကျဆင်းအောင်လုပ်ဖို့ တာဝန်ရှိတာမှန်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း လူရှိရင် အမှုရှိတာပဲဆိုတဲ့စကားနဲ့အညီ လူဦးရေများလာရင် အမှုတွေပိုများလာမယ်ဆိုတာ သဘာဝယုတ်တိရှိပါတယ်။
နိုင်ငံမှာစီးပွားရေးကျဆင်းလာရင် ဒုစရိုက်မှုကျူးလွန်တာတွေပိုဖြစ်မယ်၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေနည်းပါးပြီးအလုပ်လက်မဲ့တွေ များလာပြီဆိုရင်လည်း အမှုအခင်းတွေပိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ တွေးကြည့်ရုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။
နောက် အရက်သေစာ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ သောက်သုံးကြတာကလည်း မူခင်းဖြစ်ပွားမှုကို ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ အချက်ပါ။ လောင်းကစားသမားများကတော့ လောင်းကြေးရှုံးရင်ငွေအစား ပြန်ရလိုမှုကိုအကြောင်းပြုပြီး အမှုတွေကျူးလွန်ကြပါဦးမယ်။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ လူဦးရေကဘယ်လောက်တိုးပွားလာနေတယ်ဆိုတာ သန်းကောင်စာရင်း မကောက်ရင်တောင် သိသာတဲ့ အခြေအနေပါ။ ကိုယ့်နိုင်ငံစီးပွားရေးအကြောင်းလည်း ကိုယ်အသိဆုံးပါ။ အလုပ်လက်မဲ့ဆိုတာလည်း လူဦးရေရဲ့ ရာခိုင်နှုန်းမည်မျှလို့ မပြောနိုင်ပေမဲ့ အလုပ်လိုအပ်နေသူတွေ ဒုနှင့်ဒေးပါ။ ပြည်တွင်းမှာအလုပ်အကိုင် ရှားပါးလို့ပြည်ပကို တရားဝင်ရော တရားမဝင်ပါသွားလုပ်နေကြတာတွေကြောင့် ရွာတွေမှာ လူငယ်တွေမရှိသလောက် ဖြစ်နေပါပြီ။
ဒီအခြေအနေက မှုခင်းတွေတိုးတက်ဖြစ်ပွားစေမယ့်အခြေအနေတွေပါ။ ဒါကိုအမှုတွေကျအောင် ချရမယ်လို့ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ ညွှန်ကြားနေမယ်၊ ဖိအားပေးနေမယ်ဆိုရင် လက်တွေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်း အမှုဖွင့်မပေးဘူးဆိုတဲ့ပြသနာ ဆက်ရှိနေဦးမှာပါ။
တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးတွေရဲ့ လေးလပတ် အစည်းအဝေးကျတော့လည်း ထုံးစံအတိုင်းပါပဲ၊ ကျွန်တော်တို့တိုင်းကျွန်တော်တို့ ပြည်နယ်မှာ မှုခင်းတွေကျပါတယ်ခင်ဗျပေါ့ဒီလိုမပြောခဲ့နိုင်ရင် ကိုယ့်ဒေသ ပြန်ရောက်တဲ့အခါ လက်အောက်ကို ဖိအားပေးကြတော့တာပါပဲ။ မင်းတို့မလုပ်နိုင်ရင်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးမလုပ်နဲ့။။ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးမလုပ်နဲ့လို့ ဆိုကြတော့တာပေါ့။
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်။။ လေးလပတ်အစည်းအဝေးမှာ မှုခင်းလျှော့ချနိုင်မှု့ဆု ဆိုတာလည်းရှိနေတော့ ပြည်နယ်၊ တိုင်းတပ်ဖွဲ့မှူးတွေ ဆုရချင်ကြတာပေါ့။ အပြိုင်အဆိုင်အမှုတွေကျ ပြရတာပေါ့။ ဒီလိုဆုမျိုးတွေရတဲ့ ပြည်နယ်တိုင်းတပ်ဖွဲ့မှူးတွေ မျက်နှာပွင့်တာပေါ့။
ကိုယ့်လူကြီး မျက်နှာပွင့်နိုင်စေဖို့ အောက်ခြေမှာ ကင်းကိုက်ပြီပေါ့။ သီဟိုရီတွေနဲ့ ဖော်ထုတ်ထားတဲ့ မှုခင်ကျဆင်းရေးနည်းလမ်းတွေ၊ အစဉ်အလာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းတွေကျင့်သုံးပေမဲ့ အမှုတွေက တိုးလို့တိုးလို့ ဖြစ်လာတဲ့အခါအောက်လမ်းနည်းတွေ မသုံးမဖြစ် သုံးကြရပါတော့တယ်။
(၁) ကျွန်တော်တို့ မှတ်ထားလိုက်ပါမယ်၊ သတင်းတစ်ခုခုရရင်လာပြောပါ အမှုဖွင့်ပြီးဖမ်းပေးပါမယ်လို့ပြောပြီးပြန်လွှတ်တဲ့နည်း၊
(၄) အမှုတိုင်ရင် အချိန်ကုန်မယ်၊ အလုပ်ရှုပ်မယ်၊ ငွေကုန်မယ်၊ လူပင်ပန်းမယ်၊ တရားရုံးတွေဘာတွေသွားရမယ်၊ရှေ့နေငှားရမယ် ဆိုတာတွေပြောပြီး စိတ်ပျက်စေတဲ့နည်း၊
(၅) အခြားရဲစခန်းအပိုင်မှာ ဖြစ်တာကြောင့် ဆိုင်ရာရဲစခန်းကိုသွားပါလို့ ပြောလွှတ်တဲ့နည်း၊
(၆) ခိုးမှုကို ခိုးမှုမသင်္ကာဆိုတာနဲ့ ရေးဖွင့်တဲ့နည်း၊အမှုကြီးကို အခြားသေးငယ်တဲ့ပုဒ်မတပ်ပြီး ဖွင့်တဲ့နည်း၊
(၇) စခန်းမှူးမရှိဘူး နောက်မှလာဖွင့်ပါ၊ တိုင်ချက်စာအုပ်မြို့နယ်မှူးယူသွားလို့ နောက်မှလာဖွင့်ပါလို့ ပြောတဲ့နည်း၊
(၈) လုံးဝကို ဖွင့်မပေးတဲ့နည်း၊စတဲ့နည်းလမ်းတွေပါပဲ။ နောက်ထပ်တောင်ရှိနေဦးမလားမသိဘူး။
ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ပင်မလုပ်ငန်းက ပြည်သူတွေအတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုခင်းတွေကို အမှုဖွင့်လှစ်၊ စစ်ဆေးဖော်ထုတ်ပေးပြီး တရားစွဲတင်ပို့၊ ကျူးလွန်သူ အပြစ်ကျသည်အထိ ဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။
အခြားသောတာဝန်တွေကိုလည်း ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပေမဲ့ရဲစခန်းတစ်ခု အနေနဲ့ကတော့ မှုခင်းလုပ်ငန်းက အဓိကပါ။ဒီလုပ်ငန်းကလည်း ပြည်သူတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ရတဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ အခက်အခဲလည်းဖြစ်၊ ဥပဒေအရလည်းဆောင်ရွက်ရမယ့် ကိစ္စဖြစ်နေတာကြောင့် မဖြစ်မနေအမှုဖွင့်စစ်ဆေး ပေးရပါမယ်။ မဖွင့်ဘူးဆိုရင် တာဝန်ပျက်ကွက်တာဖြစ်သလို ပြည်သူတွေအပေါ်သစ္စာဖောက်ရာလည်း ကျပါတယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ မုန်းတီးမှုကိုလည်း ခံရပါမယ်။ ခံလည်းခံနေရပါပြီ။
ပြည်သူတစ်ယောက်ကို အမှုဖွင့်မပေးလိုက်လို့ ဒီတစ်ယောက်က ရဲကိုမကျေနပ်တော့ဘူးဆိုရင် သူ့မိသားစု သူ့ဆွေမျိုးတွေသူ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေ ဆက်ပြီးဆက်ပြီး ရဲကိုမကျေနပ်တဲ့သူတွေ ဘယ်လောက်တိုးပွားလာမလဲ။ Facebookမှာပါ တင်လိုက်ပြီဆိုရင် ရဲကိုမုန်းသွားမယ့် ပြည်သူအရေအတွက်ကို တွက်ချက်ကြည့်လိုက်စေချင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အထက်လူကြီးတွေကလည်း မှုခင်းကျဆင်းရေးမှုခင်းတွေလျှော့ချရေး မှုခင်းတွေမဖြစ်ပွားရေးဆိုတာကိုဇောင်းပေးမနေတော့ဘဲ အမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာ သဘာဝအရဖြစ်တာ လူဦးရေများလာရင် အမှုတွေတိုးလာမယ် နိုင်ငံစီးပွားရေးကျဆင်းရင် အမှုတွေများလာမယ်ဆိုတဲ့ အချက်တွေကို နားလည်လက်ခံပေးပြီး မှုခင်းကျဆင်းရေးအတွက်အလွန်အမင်း တွန်းအားပေးတာမျိုး မလုပ်သင့်တော့ပါဘူးလို့ပြောပါရစေ။
တကယ်က မှုခင်းမဖြစ်ပွားအောင် တွန်းအားပေးတာထက်ဖြစ်ပွားတဲ့အမှုတွေကို ပေါ်ပေါက်အောင် စုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်သာ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သင့်တဲ့ကာလ ရောက်နေပါပြီလို့လည်း ပြောပါရစေ။
ပြည်သူတွေကို သိစေချင်တာက အမှုဖြစ်လာရင်၊ ရဲအရေးပိုင်တဲ့အမှုဆိုရင် ရဲစခန်းကိုတိုင်ရမှာပါ။ တိုင်ရင်ရဲက ဖွင့်ကိုဖွင့်ပေးရမယ်ဆိုတာ သိစေချင်ပါတယ်။ ရဲအရေးမပိုင်တဲ့အမှုဖြစ်နေရင်တောင် ရဲကကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမှာတွေရှိနေပါသေးတယ်။ အထက်မှာ ဖော်ပြတဲ့နည်းတွေနဲ့ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်လုပ်ပြီး အမှုဖွင့်မပေးဘူးဆိုရင် ရဲရဲတင်းတင်းပြောရုံပါပဲ။
ရဲကိုပြည်သူက ကြောက်နေရတယ်ဆိုတဲ့ခေတ် မဟုတ်ပါဘူး။အမှုဖွင့်မပေးရင် မီဒီယာကနေ ဖွင့်ချရုံပါပဲ။ အထက်ကို တိုင်ကြားရုံပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေက အားနာတတ်တာကြောင့် ရှိပါစေတော့လို့လည်း လျှော့မပေးသင့်ပါဘူး။ အမှုတစ်မှု မဖွင့်လိုက်ဘူးဆိုရင် နိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအခြေအနေကို အကဲဖြတ်တဲ့နေရာမှာ အချက်အလက် မပြည့်မစုံဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ဥပဒေကိုနားမလည်ဘူးဆိုပြီး ရဲကပြောသမျှကို လက်ခံယုံကြည်ပေးဖို့လည်းမလိုပါဘူး။ ဥပဒေဆိုတာကို ထိုက်သင့်သလောက် လေ့လာထားသင့်ပါတယ်။ဒီဆောင်းပါးရေးရတာ အမှုတိုင်တန်းတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ရဲမှာဘာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာ ပြည်သူတွေသိစေချင်လို့ပါ။အမှုဖွင့်ပြီးရင်လည်း စစ်ဆေးပေးရပါဦးမယ်။ မစစ်ဆေးရင်ရဲကိုပြောရပါမယ်။
မေးရပါမယ်။ ရဲစခန်းမှာ အခက်အခဲတွေရှိနေတာမှန်ပါတယ်။ ဒါကရဲကိစ္စပါ။ ရဲလူကြီးတွေ ဖြေရှင်းပေးရမယ့် ကိစ္စပါ။ အမှုက ချက်ချင်းကို လုပ်ဆောင်ပေးရမယ့်ကိစ္စဖြစ်နေရင် ချက်ချင်းစစ်ဆေး ဆောင်ရွက်ပေးရပါလိမ့်မယ်။မစစ်ပေးရင် မေးရပါမယ်။
ဒီလိုသိထားမှ ရဲတွေရဲ့လိမ်ညာလှည့်ပတ်ခြင်းကို မခံရမှာပါ။ဒါကြောင့် ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ဥပဒေပညာရပ်ကို တတ်နိုင်သမျှ လေ့လာထားဖို့ လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ ရဲတွေကို ကြောက်စရာ၊ အားနားစရာမလိုအပ်ပါကြောင်း အသိပေးလိုက်ပါတယ်။
အမှုတိုင်တာကို ရဲကဖွင့်မပေးရင် ခုဖွင့်ပေးမှာလားဖွင့်မပေးဘူးလားလို့ ဗြောင်မေးလိုက်ရုံပါပဲဗျာ…။
Credit:ဆောင်းပါးရှင် ရဲမှူးကြီး မြင့်ဝေ(ငြိမ်း)
မှုခင်းသတင်းဂျာနယ်အတွဲ(၂၃)၊ အမှတ်(၂)ပါဆောင်းပါးအား ပြည်သူလူထု ဗဟုသုတရစေရန်ကူးယူဖော်ပြပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကြှနျတျောပွောခငျြ(ရေးခငျြ)နတောကွာပါပွီ။မီဒီယာမြား (အထူးသဖွငျ့ Facebook)မှာ မကွာခဏတှနေ့ရေသညျ့ ရဲစခနျးသို့ ရာဇဝတျမှုမြား သှားရောကျတိုငျတနျးသညျကို (သတငျးပေးသညျကို)အမှုဖှငျ့ခွငျးမပွုသညျ့ ကိစ်စဖွဈပါတယျ။
တကယျတော့ ရဲစခနျးမှာ အမှုတိုငျလြှငျ အမှုဖှငျ့ပေးရမညျမှာရဲမြား၏မဖွဈမနေ(မလှဲမသှေ) လုပျရမညျ့ အလုပျဆိုသညျကိုရဲတိုငျးသိကွပါတယျ။ အခြို့သောနားလညျနှံ့စပျသညျ့ ပွညျသူမြားနှငျ့ ဥပဒပေညာရပျ တတျကြှမျးသူမြားလညျးသိကွပါတယျ။
မသိကွသေးသော ပွညျသူမြားသိနိုငျအောငျ ရေးပွရလြှငျဖွငျ့ရာဇဝတျမှု (ရဲအရေးပိုငျသောအမှု)ဖွဈပှားကွောငျး ရဲစခနျးသို့ လာရောကျတိုငျကွားလြှငျ ရဲတှခေျေါနကွေတဲ့ FIR ဆိုတာFirst In formation Report ဖွဈပါတယျ။ မွနျမာလိုတော့ ပထမသတငျးပေးတိုငျခကျြပါ။ ဒီလိုမှုခငျး ဖွဈပှားကွောငျး ရဲထံပထမဆုံးပေးတဲ့သတငျးလို့ ဆိုတာဖွဈပါတယျ။
တိုငျခကျြလို့ အတိုချေါကွပါတယျ။ဒီလိုရာဇဝတျမှု ရဲအရေးပိုငျတဲ့အမှု ဖွဈပှားခဲ့ရငျ ကာယကံရှငျကိုယျတိုငျလာရောကျ တိုငျကွားမှသာအမှုဖှငျ့ပေးရမှာ မဟုတျပါဘူး။ နဈနာသူကာယကံရှငျကိုယျတိုငျ တိုငျကွားနိုငျသလိုကွားက သိရှိသူ၊ မွငျတှသေူ့ကလညျး တိုငျကွားနိုငျပါတယျ။
ဒါကို သတငျးပေးတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဘယျသူတိုငျတိုငျFIR ဖှငျ့ပေးရမှာ အမှုဖှငျ့စဈဆေးပေးရမှာ ရဲအလုပျပါ။တိုငျတဲ့အခါမှာလညျး ရဲစခနျးကို ကိုယျတိုငျလာရောကျတိုငျကွားရမှာ ဖွဈပမေဲ့ မလာရောကျနိုငျလို့ စာရေးသားပေးပို့တိုငျတာ၊ ကွေးနနျးစာပေးပို့တိုငျတာလညျးလုပျလို့ရပါတယျ။
ဖုနျးဆကျပွီးတော့လညျး တိုငျနိုငျပါတယျ။ ဒီလိုနညျးတှနေဲ့တိုငျရငျလညျး အမှုဖှငျ့ရမှာပါပဲ။ဘယျလိုနညျးနဲ့ တိုငျတိုငျ ပထမသတငျးပေးတိုငျခကျြဆိုတဲ့FIR ကို ခကျြခငျြးဖှငျ့ပေးရပါမယျ။ ခကျြခငျြးဖွဈပါတယျ။အခြိနျဆှဲခှငျ့လညျးမရှိပါဘူး။ ဖွဈပှားပုံ ဖွဈပှားသညျ့နရောကို သှားရောကျစဈဆေးပွီးခါမှ FIR ဖှငျ့လို့လညျး မရပါဘူး။
တိုငျပွီဆိုတာနဲ့ ဖှငျ့ရမှာပါ။ ဒါကိုပွညျသူတှသေိထားရငျအခုဖှငျ့ပေးမှာလား မဖှငျ့ပေးဘူးလားလို့ ဗွောငျပွော ဗွောငျမေးလိုကျရုံပါပဲ။အမှုဖွဈပှားတဲ့ အပိုငျနယျမွရေဲစခနျးမှာတိုငျမှ အမှုဖှငျ့ပေးရတာလညျး မဟုတျပါဘူး။ မွဈကွီးနားမှာဖွဈတဲ့အမှု ကော့သောငျးက ရဲစခနျးမှာတိုငျရငျတောငျမှ ကော့သောငျးရဲစခနျးက ဖှငျ့ကိုဖှငျ့ပေးရမှာဖွဈပါတယျ။
မွဈကွီးနားမှာ သှားတိုငျပါလို့ ပွောခှငျ့မရှိပါဘူး။ ဘယျစခနျးမှာတိုငျတိုငျ ရပါတယျ။FIR ဖှငျ့တယျဆိုတာကလညျး ဒီအမှုကို စုံစမျးစဈဆေးဖို့စတငျဆောငျရှကျခွငျးပါ။ FIR ဖှငျ့ပွီးတာနဲ့ ဒီအမှုကိုစဈဆေးဖျောထုတျဖို့ ရဲမှာတာဝနျရှိသှားပါပွီ။ဒီလို FIR ဖှငျ့ရမယျဆိုတာ ကငျြ့ထုံးဥပဒနေဲ့ ရဲလကျစှဲမှာအတိအကပြါပွီး ပွဋ်ဌာနျးပွီးဖွဈပါတယျ။
ရှောငျလှဲဖယျသှခှေငျ့ မရှိပါဘူး။ယုတျစှအဆုံး အမှုတကယျမဖွဈပါဘဲ အမှုဖွဈပှားပါတယျကြူးလှနျခံရပါတယျ၊ နဈနာပါတယျဆိုပွီး လိမျလညျတိုငျတနျးတာကို (လိမျလညျတိုငျမှနျးသိနသေညျ့တိုငျအောငျ)အမှုကိုဖှငျ့ပေးရပါမယျ။
တဈခါအမှုဖွဈပွီး အတျောကွာမှတိုငျတာကွောငျ့လညျးဖှငျ့လို့မရဘူး ဆိုတာမြိုးမရှိပါဘူး။ ရဲအရေးပိုငျမှုမှနျလြှငျဖှငျ့ပေးရပါမယျ။အခွားရဲစခနျးအပိုငျမှာ ဖွဈတဲ့အမှု ကိုယျ့စခနျးမှာလာတိုငျတာ၊ အမှုမဖွဈဘဲ လိမျလညျတိုငျတနျးတာတှအေတှကျဘယျလိုလုပျရမယျ ဆိုတာလညျး ရဲတှမှောလုပျထုံးလုပျနညျးတှေ ရှိပွီးသားပါ။
ဒါရဲအလုပျပါ။ ရဲစခနျးအလုပျပါ။ကြှနျတျောဆိုခဲ့တဲ့အတိုငျး ဥပဒေ လုပျထုံးလုပျနညျးတှရှေိနပေါလကျြ၊ ရှိနကွေောငျးလညျး သိနပေါလကျြ ရဲတှကေအမှုဖှငျ့မပေးလို့ဆိုတဲ့အသံတှေ၊ ပွညျသူတှရေဲ့ မကမြေနပျသံတှေ၊ ဆဲဆိုသံတှေ နစေ့ဉျနဲ့အမြှ ကွားနေ၊ ဖတျနရေပါတယျ။
ရဲတှကေို နှိမျခပြွောဆို ရေးသားနကွေတာတှေ၊ ခြိုးဖဲ့၊ လှောငျပွောငျတာတှေ ကွားနရေတော့ နှဈပေါငျးမြားစှာ ရဲအဖှဲ့မှာတာဝနျထမျးဆောငျခဲ့သူတဈဦးဖွဈလို့ ကြှနျတျောရှကျလာမိပါတယျ။ ပွညျသူတှဘေကျကနပွေီးလညျး မခံမရပျနိုငျဖွဈလာမိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ပဲ ဒီဆောငျးပါးကို ရေးမိတာပါ။ဒီလိုလုပျရပျတှကွေောငျ့ နောကျဆကျတှဲဖွဈရပျဆိုးတှပေါဖွဈပျေါနကွေောငျး ကွားရတော့ ပိုပွီးစိတျမခမျြးမသာ ဖွဈရပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ အမှုဖှငျ့မပေးရတဲ့ အကွောငျးအရငျးကို ပွနျလညျသုံးသပျကွညျ့မိပါတယျ။ တကယျတော့ ဒီလိုအမှုဖှငျ့မပေးတဲ့ကိစ်စတှကေ ခုမှဖွဈတာမဟုတျပါဘူး။ လှနျခဲ့တဲ့ ဆယျစုနှဈနှဈခုကြျော လောကျကတညျးက တှငျကယျြလာတာဖွဈကွောငျးလလေ့ာမိပါတယျ။
ဒီလိုရှိခဲ့လို့လညျး ၁၉၉၅ ခုနှဈနောကျပိုငျးကာလတှမှော ရဲတပျဖှဲ့အကွီးအကဲကိုယျတိုငျအရပျသားဟနျဆောငျပွီး ရဲစခနျးတှမှော အမှုသှားတိုငျတာမြိုးလုပျပါတယျ။ အမှုဖှငျ့မပေးရငျ အရေးယူတာတှလေညျးလုပျပါတယျ။ အမှုဖှငျ့မပေးရငျ ထောငျခသြညျအထိ အရေးယူမှာဖွဈကွောငျးလညျး ရဲစခနျးတှမှော အမြားမွငျသာအောငျစာရေးကပျထားစပေါတယျ။
ဥပဒလေညျးရှိပွီး၊ အထကျလူကွီးတှလေညျး မလိုလားတဲ့ဒီကိစ်စကွီးက ပပြောကျမသှားဘဲ ပိုပွီးဆိုးရှားလာတာ ဘာကွောငျ့မြားပါလိမျ့လို့ စဉျးစားကွညျ့မိပါတယျ။ရဲစခနျးတှမှော အမှုဖှငျ့မပေးတဲ့ကိစ်စ အကွောငျးအရငျးခံတှအေမြားကွီးရှိပါတယျ။ ရဲစခနျးတှဘေကျက ကွုံတှနေ့ရေတဲ့အခကျအခဲတှေ အမြားကွီးရှိနပေါတယျ။
ရဲစခနျးတှမှောအမှုစဈအရာရှိအငျအားက လြှော့နညျးနတေဲ့အပွငျ အမှုစဈလုပျငနျးမဟုတျတဲ့ ပွငျပလုပျငနျးတှကေလညျး မြားနလေတေော့ နစေ့ဉျနဲ့အမြှ ဖွဈပှားနတေဲ့အမှုတှကေို နိုငျအောငျမစဈနိုငျကွဘူး။ အခြို့သောမွို့ကွီးတှကေ ရဲစခနျးတှမှောအမှုစဈတဈယောကျမှာ အမှုရာခြီပွီးရှိတယျလို့ သိရပါတယျ။
ဘယျလိုမှ နိုငျနငျးအောငျစဈဆေးနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ ပွညျ့စုံခိုငျမာအောငျလညျး စဈဆေးနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ တရားခံအပွဈကနြိုငျလောကျတဲ့ သကျသေ အထောကျအထားတှလေညျး ဘယျလိုမှရှာဖှတေငျပွနိုငျမယျ မဟုတျပါဘူး။နောကျအခကျအခဲတဈခုက မွို့ပျေါမှာဖွဈပှားတဲ့ အမှုဆိုရငျတောငျ ဖွဈတဲ့နရောကိုသှားဖို့၊ သကျသရှေိတဲ့နရောကိုသှားဖို့၊ သကျသခေံပစ်စညျးရောကျသှားတဲ့ နရောမှာသှားသိမျးဖို့စတာတှအေတှကျ လမျးလြှောကျသှားလို့၊ စကျဘီနဲ့သှားလို့ရတဲ့ ခတျေမဟုတျတော့ပါဘူး။
သကျသခေံပစ်စညျး အတှကျထငျမွငျခကျြ တောငျးခံဖို့ နပွေညျတျောက ဓါတုဗဒေဝနျရုံးကို သှားရမယျဆိုရငျ လမျးစရိတျကလညျး မသေးလှပါ။အမှုစဈစရိတျ ပေးတာရှိပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ လောကျငှနိုငျပါ့မလား။ ဒီတော့အမှုစဈတှေ လကျထဲမှာအမှုတှပေုံနပွေီပေါ့။ ဘယျစခနျးမှူး၊ ဘယျမွို့နယျရဲတပျဖှဲ့မှူးက အမှုထပျဖှငျ့ခငျြပါ့မလဲ။
ခုပွောခဲ့တာ ရဲစခနျးတှဘေကျက ကွုံတှနေ့ရေတဲ့ အခကျအခဲ အခြို့ပါ။ အခွားလညျးရှိပါဦးမယျ။(နောကျပိုငျးမှာထပျမံတငျပွပါမယျ)အမှုတှဖှေငျ့မပေးကွတဲ့ကိစ်စမှာ အဓိကကတြယျလို့ ကြှနျတျောထငျမွငျတဲ့ အခကျြကတော့ မှုခငျးကဆြငျးရေးဆိုတာကို လှဲမှားစှာဆောငျရှကျကွတာကွောငျ့ဖွဈတယျလို့မွငျမိပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ရဲတပျဖှဲ့မှာ မှုခငျးကဆြငျးရေးဆိုတဲ့ လုပျငနျးစဉျရှိပါတယျ။ မှနျပါတယျ၊ ရဲတပျဖှဲ့အနနေဲ့ မှုခငျးတှကေဆြငျးအောငျလုပျဖို့ တာဝနျရှိတာမှနျပါတယျ။ သို့သျောလညျး လူရှိရငျ အမှုရှိတာပဲဆိုတဲ့စကားနဲ့အညီ လူဦးရမြေားလာရငျ အမှုတှပေိုမြားလာမယျဆိုတာ သဘာဝယုတျတိရှိပါတယျ။
နိုငျငံမှာစီးပှားရေးကဆြငျးလာရငျ ဒုစရိုကျမှုကြူးလှနျတာတှပေိုဖွဈမယျ၊ အလုပျအကိုငျ အခှငျ့အလမျးတှနေညျးပါးပွီးအလုပျလကျမဲ့တှေ မြားလာပွီဆိုရငျလညျး အမှုအခငျးတှပေိုဖွဈလာမယျဆိုတာ တှေးကွညျ့ရုံနဲ့သိနိုငျပါတယျ။
နောကျ အရကျသစော၊ မူးယဈဆေးဝါးတှေ သောကျသုံးကွတာကလညျး မူခငျးဖွဈပှားမှုကို ပံ့ပိုးပေးနတေဲ့ အခကျြပါ။ လောငျးကစားသမားမြားကတော့ လောငျးကွေးရှုံးရငျငှအေစား ပွနျရလိုမှုကိုအကွောငျးပွုပွီး အမှုတှကြေူးလှနျကွပါဦးမယျ။
ကြှနျတျောတို့နိုငျငံရဲ့ လူဦးရကေဘယျလောကျတိုးပှားလာနတေယျဆိုတာ သနျးကောငျစာရငျး မကောကျရငျတောငျ သိသာတဲ့ အခွအေနပေါ။ ကိုယျ့နိုငျငံစီးပှားရေးအကွောငျးလညျး ကိုယျအသိဆုံးပါ။ အလုပျလကျမဲ့ဆိုတာလညျး လူဦးရရေဲ့ ရာခိုငျနှုနျးမညျမြှလို့ မပွောနိုငျပမေဲ့ အလုပျလိုအပျနသေူတှေ ဒုနှငျ့ဒေးပါ။ ပွညျတှငျးမှာအလုပျအကိုငျ ရှားပါးလို့ပွညျပကို တရားဝငျရော တရားမဝငျပါသှားလုပျနကွေတာတှကွေောငျ့ ရှာတှမှော လူငယျတှမေရှိသလောကျ ဖွဈနပေါပွီ။
အရကျဆိုတာကလညျး ပေါမှပေါ၊ မူးယဈဆေးဝါးကတြော့သမ်မတကွီးကိုယျတိုငျ ပါဝငျနရေပါသညျ မဟုတျပါလား။လောငျးကစားဆိုတာကလညျး နိုငျငံတကာနဲ့ ဆကျသှယျကစားနိုငျသညျဆိုတော့ ဘာပွောကောငျးမလဲပေါ့။
ဒီအခွအေနကေ မှုခငျးတှတေိုးတကျဖွဈပှားစမေယျ့အခွအေနတှေပေါ။ ဒါကိုအမှုတှကေအြောငျ ခရြမယျလို့ဆငျ့ကဲဆငျ့ကဲ ညှနျကွားနမေယျ၊ ဖိအားပေးနမေယျဆိုရငျ လကျတှဖွေ့ဈပျေါနတေဲ့အတိုငျး အမှုဖှငျ့မပေးဘူးဆိုတဲ့ပွသနာ ဆကျရှိနဦေးမှာပါ။
တပျမတျောအစိုးရလကျထကျက လေးလပတျ အစညျးအဝေး ကငျြးပပွီဆိုရငျ ရဲတပျဖှဲ့စှမျးဆောငျရညျကောငျးလို့ နိုငျငံတဈဝမျးမှာ အမှုကွီးတှေ ဘယျလောကျထိအောငျကဆြငျးသှားပါပွီ၊ ဒုစရိုကျမှုတှဆေိုလညျး ဘယျမြှအထိ နှိမျနှငျးလိုကျပါပွီဆိုပွီး တငျပွကွပါတယျ။ ဘယျသူကမှအမှုတှတေိုးဖွဈနပေါတယျလို့ မတငျပွခငျြပါဘူး၊ မတငျပွရဲပါဘူး။ မငျးမလုပျနိုငျဘူးလားလို့ ဘယျအမေး ခံခငျြပါ့မလဲ။
တိုငျးနှငျ့ပွညျနယျ ရဲတပျဖှဲ့မှူးတှရေဲ့ လေးလပတျ အစညျးအဝေးကတြော့လညျး ထုံးစံအတိုငျးပါပဲ၊ ကြှနျတျောတို့တိုငျးကြှနျတျောတို့ ပွညျနယျမှာ မှုခငျးတှကေပြါတယျခငျဗပြေါ့ဒီလိုမပွောခဲ့နိုငျရငျ ကိုယျ့ဒသေ ပွနျရောကျတဲ့အခါ လကျအောကျကို ဖိအားပေးကွတော့တာပါပဲ။ မငျးတို့မလုပျနိုငျရငျခရိုငျရဲတပျဖှဲ့မှူးမလုပျနဲ့။။ မွို့နယျရဲတပျဖှဲ့မှူးမလုပျနဲ့လို့ ဆိုကွတော့တာပေါ့။
မွနျမာနိုငျငံ ရဲတပျဖှဲ့ဌာနခြုပျ။။ လေးလပတျအစညျးအဝေးမှာ မှုခငျးလြှော့ခနြိုငျမှု့ဆု ဆိုတာလညျးရှိနတေော့ ပွညျနယျ၊ တိုငျးတပျဖှဲ့မှူးတှေ ဆုရခငျြကွတာပေါ့။ အပွိုငျအဆိုငျအမှုတှကြေ ပွရတာပေါ့။ ဒီလိုဆုမြိုးတှရေတဲ့ ပွညျနယျတိုငျးတပျဖှဲ့မှူးတှေ မကျြနှာပှငျ့တာပေါ့။
ကိုယျ့လူကွီး မကျြနှာပှငျ့နိုငျစဖေို့ အောကျခွမှော ကငျးကိုကျပွီပေါ့။ သီဟိုရီတှနေဲ့ ဖျောထုတျထားတဲ့ မှုခငျကဆြငျးရေးနညျးလမျးတှေ၊ အစဉျအလာဆောငျရှကျခဲ့တဲ့ နညျးလမျးတှကေငျြ့သုံးပမေဲ့ အမှုတှကေ တိုးလို့တိုးလို့ ဖွဈလာတဲ့အခါအောကျလမျးနညျးတှေ မသုံးမဖွဈ သုံးကွရပါတော့တယျ။
(၁) ကြှနျတျောတို့ မှတျထားလိုကျပါမယျ၊ သတငျးတဈခုခုရရငျလာပွောပါ အမှုဖှငျ့ပွီးဖမျးပေးပါမယျလို့ပွောပွီးပွနျလှတျတဲ့နညျး၊
(၂) FIR မဟုတျတဲ့စာအုပျ(FIR စာအုပျအတု)မှာရေးမှတျထားလိုကျတဲ့နညျး၊
(၃) တိုငျတဲ့သူစိတျညဈအောငျ အခြိနျဆှဲ၊ ဟိုမေး သညျမေးဟိုပွော သညျပွောလုပျတဲ့နညျး၊
(၄) အမှုတိုငျရငျ အခြိနျကုနျမယျ၊ အလုပျရှုပျမယျ၊ ငှကေုနျမယျ၊ လူပငျပနျးမယျ၊ တရားရုံးတှဘောတှသှေားရမယျ၊ရှနေ့ငှေားရမယျ ဆိုတာတှပွေောပွီး စိတျပကျြစတေဲ့နညျး၊
(၅) အခွားရဲစခနျးအပိုငျမှာ ဖွဈတာကွောငျ့ ဆိုငျရာရဲစခနျးကိုသှားပါလို့ ပွောလှတျတဲ့နညျး၊
(၆) ခိုးမှုကို ခိုးမှုမသင်ျကာဆိုတာနဲ့ ရေးဖှငျ့တဲ့နညျး၊အမှုကွီးကို အခွားသေးငယျတဲ့ပုဒျမတပျပွီး ဖှငျ့တဲ့နညျး၊
(၇) စခနျးမှူးမရှိဘူး နောကျမှလာဖှငျ့ပါ၊ တိုငျခကျြစာအုပျမွို့နယျမှူးယူသှားလို့ နောကျမှလာဖှငျ့ပါလို့ ပွောတဲ့နညျး၊
(၈) လုံးဝကို ဖှငျ့မပေးတဲ့နညျး၊စတဲ့နညျးလမျးတှပေါပဲ။ နောကျထပျတောငျရှိနဦေးမလားမသိဘူး။
ရဲတပျဖှဲ့ရဲ့ ပငျမလုပျငနျးက ပွညျသူတှအေတှငျးမှာ ဖွဈပှားပျေါပေါကျတဲ့ ရာဇဝတျမှုခငျးတှကေို အမှုဖှငျ့လှဈ၊ စဈဆေးဖျောထုတျပေးပွီး တရားစှဲတငျပို့၊ ကြူးလှနျသူ အပွဈကသြညျအထိ ဆောငျရှကျရမယျ့လုပျငနျးဖွဈပါတယျ။
အခွားသောတာဝနျတှကေိုလညျး ဆောငျရှကျရမှာ ဖွဈပမေဲ့ရဲစခနျးတဈခု အနနေဲ့ကတော့ မှုခငျးလုပျငနျးက အဓိကပါ။ဒီလုပျငနျးကလညျး ပွညျသူတှနေဲ့ တိုကျရိုကျဆကျဆံဆောငျရှကျရတဲ့ လုပျငနျးဖွဈပါတယျ။ ပွညျသူတှရေဲ့ အခကျအခဲလညျးဖွဈ၊ ဥပဒအေရလညျးဆောငျရှကျရမယျ့ ကိစ်စဖွဈနတောကွောငျ့ မဖွဈမနအေမှုဖှငျ့စဈဆေး ပေးရပါမယျ။ မဖှငျ့ဘူးဆိုရငျ တာဝနျပကျြကှကျတာဖွဈသလို ပွညျသူတှအေပျေါသစ်စာဖောကျရာလညျး ကပြါတယျ။ ပွညျသူတှရေဲ့ မုနျးတီးမှုကိုလညျး ခံရပါမယျ။ ခံလညျးခံနရေပါပွီ။
ပွညျသူတဈယောကျကို အမှုဖှငျ့မပေးလိုကျလို့ ဒီတဈယောကျက ရဲကိုမကနြေပျတော့ဘူးဆိုရငျ သူ့မိသားစု သူ့ဆှမြေိုးတှသေူ့မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးတှေ ဆကျပွီးဆကျပွီး ရဲကိုမကနြေပျတဲ့သူတှေ ဘယျလောကျတိုးပှားလာမလဲ။ Facebookမှာပါ တငျလိုကျပွီဆိုရငျ ရဲကိုမုနျးသှားမယျ့ ပွညျသူအရအေတှကျကို တှကျခကျြကွညျ့လိုကျစခေငျြပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ အထကျလူကွီးတှကေလညျး မှုခငျးကဆြငျးရေးမှုခငျးတှလြှေော့ခရြေး မှုခငျးတှမေဖွဈပှားရေးဆိုတာကိုဇောငျးပေးမနတေော့ဘဲ အမှုဖွဈတယျဆိုတာ သဘာဝအရဖွဈတာ လူဦးရမြေားလာရငျ အမှုတှတေိုးလာမယျ နိုငျငံစီးပှားရေးကဆြငျးရငျ အမှုတှမြေားလာမယျဆိုတဲ့ အခကျြတှကေို နားလညျလကျခံပေးပွီး မှုခငျးကဆြငျးရေးအတှကျအလှနျအမငျး တှနျးအားပေးတာမြိုး မလုပျသငျ့တော့ပါဘူးလို့ပွောပါရစေ။
တကယျက မှုခငျးမဖွဈပှားအောငျ တှနျးအားပေးတာထကျဖွဈပှားတဲ့အမှုတှကေို ပျေါပေါကျအောငျ စုံစမျးဖျောထုတျဖို့အတှကျသာ ဦးစားပေးဆောငျရှကျသငျ့တဲ့ကာလ ရောကျနပေါပွီလို့လညျး ပွောပါရစေ။
ပွညျသူတှကေို သိစခေငျြတာက အမှုဖွဈလာရငျ၊ ရဲအရေးပိုငျတဲ့အမှုဆိုရငျ ရဲစခနျးကိုတိုငျရမှာပါ။ တိုငျရငျရဲက ဖှငျ့ကိုဖှငျ့ပေးရမယျဆိုတာ သိစခေငျြပါတယျ။ ရဲအရေးမပိုငျတဲ့အမှုဖွဈနရေငျတောငျ ရဲကကူညီဆောငျရှကျပေးရမှာတှရှေိနပေါသေးတယျ။ အထကျမှာ ဖျောပွတဲ့နညျးတှနေဲ့ဝလေ့ညျကွောငျပတျလုပျပွီး အမှုဖှငျ့မပေးဘူးဆိုရငျ ရဲရဲတငျးတငျးပွောရုံပါပဲ။
ရဲကိုပွညျသူက ကွောကျနရေတယျဆိုတဲ့ခတျေ မဟုတျပါဘူး။အမှုဖှငျ့မပေးရငျ မီဒီယာကနေ ဖှငျ့ခရြုံပါပဲ။ အထကျကို တိုငျကွားရုံပါပဲ။ ကြှနျတျောတို့ပွညျသူတှကေ အားနာတတျတာကွောငျ့ ရှိပါစတေော့လို့လညျး လြှော့မပေးသငျ့ပါဘူး။ အမှုတဈမှု မဖှငျ့လိုကျဘူးဆိုရငျ နိုငျငံရဲ့တရားဥပဒစေိုးမိုးမှုအခွအေနကေို အကဲဖွတျတဲ့နရောမှာ အခကျြအလကျ မပွညျ့မစုံဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
ပွညျသူတှအေနနေဲ့ ဥပဒကေိုနားမလညျဘူးဆိုပွီး ရဲကပွောသမြှကို လကျခံယုံကွညျပေးဖို့လညျးမလိုပါဘူး။ ဥပဒဆေိုတာကို ထိုကျသငျ့သလောကျ လလေ့ာထားသငျ့ပါတယျ။ဒီဆောငျးပါးရေးရတာ အမှုတိုငျတနျးတာနဲ့ ပတျသကျလို့ရဲမှာဘာတာဝနျရှိတယျဆိုတာ ပွညျသူတှသေိစခေငျြလို့ပါ။အမှုဖှငျ့ပွီးရငျလညျး စဈဆေးပေးရပါဦးမယျ။ မစဈဆေးရငျရဲကိုပွောရပါမယျ။
မေးရပါမယျ။ ရဲစခနျးမှာ အခကျအခဲတှရှေိနတောမှနျပါတယျ။ ဒါကရဲကိစ်စပါ။ ရဲလူကွီးတှေ ဖွရှေငျးပေးရမယျ့ ကိစ်စပါ။ အမှုက ခကျြခငျြးကို လုပျဆောငျပေးရမယျ့ကိစ်စဖွဈနရေငျ ခကျြခငျြးစဈဆေး ဆောငျရှကျပေးရပါလိမျ့မယျ။မစဈပေးရငျ မေးရပါမယျ။
ဒီလိုသိထားမှ ရဲတှရေဲ့လိမျညာလှညျ့ပတျခွငျးကို မခံရမှာပါ။ဒါကွောငျ့ ပွညျသူတှအေနနေဲ့ ဥပဒပေညာရပျကို တတျနိုငျသမြှ လလေ့ာထားဖို့ လိုအပျကွောငျးနဲ့ ရဲတှကေို ကွောကျစရာ၊ အားနားစရာမလိုအပျပါကွောငျး အသိပေးလိုကျပါတယျ။
အမှုတိုငျတာကို ရဲကဖှငျ့မပေးရငျ ခုဖှငျ့ပေးမှာလားဖှငျ့မပေးဘူးလားလို့ ဗွောငျမေးလိုကျရုံပါပဲဗြာ…။
Credit:ဆောငျးပါးရှငျ ရဲမှူးကွီး မွငျ့ဝေ(ငွိမျး)
မှုခငျးသတငျးဂြာနယျအတှဲ(၂၃)၊ အမှတျ(၂)ပါဆောငျးပါးအား ပွညျသူလူထု ဗဟုသုတရစရေနျကူးယူဖျောပွပေးခွငျး ဖွဈပါသညျ။
မိန်းမတစ်ယောက်က ဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာသူ့လက်တွဲဖော်နဲ့ ညှိမရနှိုင်းမရနဲ့ သဟဇာတ မဖြစ်တော့လဲ သိလား
This Month : 34895
This Year : 176352
Total Users : 535376
Total views : 2420853